Uzo nke ubochi: ndi enyi nke ezigbo n'anya nke onwe | EKPERE NA OZI
Nraranye nke ụbọchị: ezigbo enyi nke ezigbo ịhụnanya
Paolo Tescione	Edere ya November 22, 2020 November 22, 2020
Ọ bụ ajọ enyi. Ọ dịghị onye nwere ike igbochi anyị ịhụ n'anya nke ahaziri nke onwe anyị, nke na-akpali anyị ịhụ ndụ n'anya na iji omume ọma chọọ onwe anyị mma; mana enweghị ịhụnanya onwe anaghị achịkwa ma bụrụ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị mgbe ọ na-eme ka anyị na-eche naanị maka onwe anyị, anyị hụrụ naanị anyị n'anya ma na-achọsi ike ka ndị ọzọ nwee mmasị n'ebe anyị nọ. Ọ bụrụ na anyị ekwuo, anyị chọrọ ka a nụ anyị; ọ bụrụ na anyị ataa ahụhụ, gbaghara; ọ bụrụ na anyị na-arụ ọrụ, na-eto anyị; anyị achọghị iguzogide, na-emegide anyị, na-asọ anyị oyi. N’enyo a ị naghị amata onwe gị?
Igba aghara nke ihunanya onwe onye. Otutu ntụpọ bilitere site na omume ọjọọ a! Maka ntakịrị ihe ngọpụ, mmadụ enwetaghị mmasị, bilie imegide ndị ọzọ ma mee ka ha buru ibu nke ọnọdụ ọjọọ ya! Ebee ka ọchịchọ, enweghị ndidi, iwe, iwe na-ebili? Site n'ịhụ onwe gị n'anya. Ebee ka ụjọ, ntụkwasị obi, obi nkoropụ na-esi? Site n'ịhụ onwe gị n'anya. Olee ebe ntamu ndị ahụ na-atamu ntamu? Site n'ịhụ onwe gị n'anya. Ọ bụrụ na anyị merie ya, olee oke nsogbu anyị ga-enwe!
Ọ na-emebi ezi ihe emere. Nsi nke ihunanya onwe nke otutu oru oma na-eme ka anyi ghara inweta ya! Ihe efu, iju onwe ya afọ, afọ ojuju ebumpụta ụwa a na-achọ ebe ahụ, na-atọrọ ihe ruru, n'ozuzu ma ọ bụ akụkụ ya. Ego ole, ekpere, udo, àjà, ga-abụ nke na-enweghị mkpụrụ, n'ihi na ha sitere ma ọ bụ soro ịhụnanya onwe onye! Ebe ọ bụla ọ gwakọtara, ihe nkwata na ihe rụrụ arụ! Woń gaghị eme ihe niile i nwere ike ime iji chụpụ ya? I gaghi edebe ya dika onye iro gi?
OMUME. - Hụ ihe ọma gị n'anya mgbe niile, ya bụ, ka Chukwu si chọọ ya ma ọ bụrụhaala na ọ gaghị emerụ ikike onye agbata obi gị.
Nke gara aga Post Gara aga post:Ememe nke Jisus Kraist, Eze nke Eluigwe na Ala, Sọnde 22 Nọvemba 2020
Next Post → Post ozo:Pope Francis na-agba ndị ntorobịa na-eto eto ume ịmụta ihe n'aka ndị ogbenye